गन्तब्य नेपाल न्युज :: राजनीति
महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई शेखर कोइरालाको अपील : विवेकको प्रयोग गर्नुस्
नेपाललाई साथ नदिएका एमाले नेताहरू ओलीसँग वार्ता गर्न बालकोटमा
नेपाली पुगेका सबै ठाउँमा एमाले पुगेको छ :ओली
देउवासँग चिन र भारतका राजदुतको भेटघाट
यी तीन जनाको सेटिङमा सर्वोच्चको भवन निर्माणको जिम्मा समानान्तरलाई
काठमाडौं, १३ फागुन । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का विनापुरी–कालिका समानान्तर जे.भीले पाउन सफल भएको छ । यो ठेक्कामा योजनावद्ध रुपमा सेटिङ गरिएको व्यवसायीको आरोप छ ।
सर्वोच्चले अइतबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जानकारी दिएको छ । यो ठेक्कामा राज्यलाई १ सय ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षती पुर्याइएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको यो ठेक्कामा कालिका समानान्तरले ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको मूल्यमा ठेक्का पाएको हुनसक्ने व्यवसायीको अनुमान छ । यो ठेक्काले राज्यलाई करोडौ नोक्सानी भएकाले यसलाई रद्ध गर्नुपर्ने वा म्याद थप गरी अन्य कम्पनीहरुलाई पनि सहभागि हुने अवसर दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीले माग गरेका छन् । बोलपत्रमा दर्जनौ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा निर्माण लागत कम्तीमा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुन जान्छ । त्यो भनेको राज्य कोषको बचत हो । तर यसमा कम लागतमा निर्माण जिम्मा दिने भन्दा पनि बढी रकममा ठेक्का पारेर रकम बाडीचुडी खाने योजनाले काम गरेको प्रष्ट भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
समानान्तरलाई ठेक्का पार्न समानान्तरका अच्युत खरेल, नेकपाका नेता महेश बस्नेत र कालिकाका विक्रम पाण्डेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्रोत बताउछन । गत पुस ६ गते राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीको लागि आह्वान गरिएको यसको बोलपत्रमा विनापुरी कालिका समानान्तर जे.भी, ओआशिष प्यासिफिक जे.भी, भ्याल्ली कन्ट्रक्सन जे.भी र हनुमान क्न्स्ट्रक्सन जे.भी.ले मात्र आवेदन दिएका थिए ।
त्यसलगतै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ को कारण कम्पनी दर्ता र बैंक ग्यारेन्टी बनाउँन समय लाग्ने भएकाले दिने समय थप गर्न सर्वोच्चलाई पत्राचार गरेको थियो । तर उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गरेदेखि नै व्यवसायीहरुले सेटिङको आशंका गरेका थिए ।
विप्लव समूहका काठमाडौं सेक्रेटरीसहित तीन जना पक्राउ
मुख्यमन्त्रीमा डोरमणीलाई कसैले हटाउन सक्दैन : मन्त्री फुँयाल
विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा शाक्य नियुक्त
काठमाडौं, २४ कात्तिक । उर्जा मन्त्रालयले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मका लागि भन्दै मन्त्रालयले शाक्यलाई निमित्त प्रमुख तोकेको हो । उनले सोमबार नै पदबाहाली गरेका छन् ।
काठमाडौं, १९ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। मंगलबार विश्वकर्माको कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएको छ भने बोल्न समेत सुरु गरेका छन्।
चार दिनदेखि भेन्टिलेटरमा उपचाररत विश्वकर्माको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार देखिएको डाक्टरले जानकारी गराएको सहयोगी टेक बहादुर विश्वकर्माले बताए। उनले भने, ६ दिन देखि बेहोस अवस्थामा उपचार भएको थियो। होसमा आउनुभएको छ।
विश्वकर्माको फोक्सोमा समस्या देखिएपछि भेन्टिलेटर मा उपचार भएको भइरहेको थियो। निमोनिया समेत देखिएका विश्वकर्माको फोक्सोले काम गर्न सुरु गरेको बताइएको छ। कात्तिक १ मा कोरोना संक्रमण देखिएपछि उनी वीर अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि उनलाई वीरबाट ग्र्यान्डी अस्पताल सारिएको थियो।
भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाणे काठमाडौं आईपुगे
काठमाडौं, १९ कात्तिक । भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवाणे काठमाडौं आइपुगेका छन् । भारतीय वायु सेनाको विमानमार्फत उनी बुधबार काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार नरवाणेको भ्रमण टोली दुई वटा विमानमा काठमाडौं आएको छ । तर उनको औपचारिक कार्यक्रम भने भोलि बिहानबाट मात्र सुरु हुनेछ। उनी विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागि भएर शुक्रबार स्वदेश फर्कने छन् । स्वदेश फर्किनु अघि सेनाध्यक्ष नरावणेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ।
नेकपा एकतामा गम्भिर संकट आएको छ ः महासचिव पौडेल
काठमाडौं, १६ कात्तिक । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेलले एकतामा गम्भीर संकट आएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।
“यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०को एकीकृत र अविभाज्य अस्तित्वका सामु गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ । आपसी अन्तरविरोधलाई सहमतिका साथ समाधान गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका लागि योगदान गर्न समस्ता नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य कमरेडहरुसमक्ष अनुरोध गर्दछु,” उनले भनेका छन् ।
नेपाल र चीन सीमाको ११ नम्बर पिलर हुम्लामा भेटियो
काठमाडौं, ८ असोज । नेपाल र चीन सीमानाको ११ नम्बरको पिलर बुधबार भेटिएको छ। हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरन्जीवी गिरीको नेतृत्वमा गएको नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसहितको टोलीले वषौसम्म भेट्न नसकिएको पिलर बुधबार फेला पारेको हो।
पिलर दुरूस्त रहेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर तामाङ (लामा) ले जानकारी दिए । उनका अनुसार ११ नम्बर पिलर भएको टाकुल्ले भन्ने स्थान चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको लाप्चाबाट दुई दिनको पैदल दूरीमा छ।
नेपाल र चीनको सीमामा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मुख्य ७९ र सहायक २१ गरी १०० वटा मार्कर राखिएका छन्।
पूर्वजानकारी नदिई लोडसेडिङ भए खबर उर्जा मन्त्रालयमा खबर गर्नु
काठमाडौं, ५ असोज । उर्जा,जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले कुनै जानकारीबिना विद्युत सेवा नियमित नभएमा खबर गर्न आग्रह गरेको छ। पूर्व सूचना बिना लोडसेडिङ भएमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालय र विद्युत प्राधिकरणमा खबर गर्न मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्।
सडक विस्तारका क्रममा आइतबार बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म र ११ बजेदेखि अपराह्न १ बजेसम्म ललितपुरको पौडेल गाउँ, किटिनी, लेनिनथोक, भ्यू भृकुटी लगायत स्थानमा ११ के.भी प्रसारण लाइन नजिकैका ७ वटा ट्रान्सफर्मरबाट वितरित विद्युत आपूर्ति बन्द हुने पूर्व सूचना नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगनखेल वितरण केन्द्रले जारी गरेको सन्दर्भमा भ्रम उत्पन्न हुन गएको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्।
यदि कतै पूर्वजानकारी बिना विद्युत सेवा नियमित नभएको अवस्थामा माननीय ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री श्री वर्षमान पुन अनन्तको सचिवालय वा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तत्काल खबर गर्नुहुन अनुरोध छु, भट्टले फेसबुकमा लेखेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा भदौ १७ सम्म निषेधाज्ञा
काठमाडौं, १० भदौ । काठमाडौं उपत्यकाको तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले उपत्यकामा भदौ १७ सम्म निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेको छ।मंगलबार र बुधबार बसेको बैठकले सात दिन थप्ने निर्णय गरेको हो।
जिल्लास्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) को बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभरि निषेधाज्ञाको समय बढाउन सिफारिस गरेको थियो। उपत्यकाका मेयरहरुले पनि निषेधाज्ञा थप गर्न सुझाव दिएका थिए।
फेरी सुनसान बन्यो काठमाडौ उपत्यका
काठमाडौं, ४ भदौ । गएको चैत ११ देखि तीन महिनासम्म लकडाउन ब्यहोरेका काठमाडौं उपत्यकाबासी पुन आजदेखि लकडाउनमा छन् । कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिकरुपमा बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ १० गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्किन नागरिकहरुलाई आह्वन गरिएको छ ।
उपत्यकामा सडकमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति छ । सवारी साधन चलाउने र पैदलयात्रा गर्नेलाई पनि उनीहरुले सोधखोज गरिरहेको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर निस्किनेलाई कारबाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।
नेकपाको विवाद समाधान गर्न ६ सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं, ३० साउन । नेकपाभित्रको विवाद समाधान गर्न ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ। यसअघि विवाद मिलाउन लगातार छलफलमा सहभागी महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा कार्यदलमा छन्। यस्तै कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र पम्फा भुसाललाई पनि राखिएको एक नेताले बताए।
कार्यदलमा ओली निकटबाट पौडेल र पोखरेल छन् भने प्रचण्ड निकटबाट शर्मा र भुसाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकटबाट पाण्डे र रावललाई राखिएको छ। पार्टी विवाद समाधान गर्न बिहीबारदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले लगातार छलफल गरिरहेका छन्। शुक्रबारको बालुवाटार छलफलमा ओली र प्रचण्डसहित महासचिव पौडेल, प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासमेत सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यदललाई समय नतोकिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच दिनभित्र पार्टीको सिनारियो के हुन्छ हेर्नुस् भनेकाले कार्यदलले आफ्नो कार्य छिट्टै पूरा गर्ने बताइएको छ।
काठमाडौं, २६ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय विभागमा आइतबार उपप्रमुख, सचिव र सदस्य मनोनयन गरी पूर्णता दिएका छन्। गोपालमान श्रेष्ठ प्रमुख रहेको संगठन विभागको सचिवमा विनकुमार विश्वकर्मा पिहत ४० जना सदस्य मनोनित भएका छन्। हरिप्रसाद नेपाल प्रमुख रहेको शिक्षा विभागको उपप्रमुखमा शेषनाथ अधिकारी र सचिवमा डा कृष्णप्रसाद पौडल र ३८ जना सदस्य मनोनित गरिएको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
महेन्द्र यादव प्रमुख रहेका यातायात व्यवसायी समन्वय विभागमा ४१ सदस्य, फरमूल्लाह मंसुर प्रमुख रहेको मुस्लिम विभागको सचिवमा परवेज अन्सारी र अन्य ३७ जना सदस्य, अजयकुमार चौरसिया प्रमुख रहेको तराई–मधेश समन्वय विभागको उपप्रमुखमा श्रीप्रसाद राउत र सचिवमा रामनारायणप्रसाद कुर्मी तथा ३७ सदस्य मनोनयन गरिएको छ। त्यस्तै, रमेश रिजाल प्रमख रहेको संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागमा ४० सदस्य, अम्बिका बस्नेत प्रमुख रहेको वन, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन विभागमा ३९ सदस्य, आनन्दप्रसाद ढुंगाना प्रमुख रहेको वित्तीय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभागको उपप्रमुखमा गोविन्दबहादुर मल्ल र ३८ सदस्य मनोनयन गरिएको छ।
अर्जुनप्रसाद जोशी प्रमुख रहेको स्थानीय तह समन्वय विभागमा ३८ सदस्य, वीरबहादुर बलायर प्रमुख रहेको निर्माण व्यवसायी समन्वय विभागमा ३९ सदस्य, शंकर भण्डारी प्रमुख रहेको तरुण विभागको सचिवमा श्यामप्रसाद श्रेष्ठ र सदस्यमा ४० सदस्य, मोहनबहादुर बस्नेत प्रमुख रहेको खेलकूद विभागको उपप्रमुखमा मोहनकुमार राई र मीनकृष्ण महर्जन तथा २७ सदस्य मनोनयन गरिएको छ। तरुण विभागलाई गत १७ जेठमा र खेलकूद विभागलाई २८ जेठमा पूर्णता दिइएको थियो।
कांग्रेस विधानको दफा ३७ मा केन्द्रीय विभाग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। विधानमा २८ विभाग रहने व्यवस्था भए पनि विधानकै अधिकार प्रयोग गरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत ११ पुसको बैठकले महासमिति वा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने गरी विभागको संख्या बढाएर ४७ पु¥याउने निर्णय गरेको थियो। सभापति देउवाले पूर्णता दिएका केन्द्रीय विभागमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले भने सहभागिता जनाएका छैनन्।
काठमाडौं, २४ असार । आजका लागि तय भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ।
बैठक असार २६ गते शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। पार्टीभित्रको विवादका कारण बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक शुक्रबारसम्मका लागि सरेको हो।
नेकपाभित्र चर्किएको विवादका कारण बैठक लगातार चार पटकसम्म स्थगित भएको छ। गत बुधबार र बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएको थियो।
काठमाडौं ,१२ जेठ । यतिखेर पूरै विश्व कोरोना महामारीले आक्रान्त छ । नेपाल पनि यो महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित भइसकेको छ । एकातिर महामारी फैलने त्रास र यसलाई रोक्नैपर्ने चुनौती छ, जसका कारण दुर्ई महिनादेखि सम्पूर्ण रुपमा बन्द मुलुक तेस्रो महिना पनि बन्दाबन्दीमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कातिर तन्किँदै गएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट ल्याइसकेको छ । उद्योग, व्यवसाय ठप्प छन्, लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन् । निम्न आय भएका र दैनिक आर्जनमा गुजारा गर्नेहरु त लकडाउन सुरु भएदेखि नै संकटमा थिए, अब त राम्रै सञ्चिति हुनेहरुको पनि गुजारा कठिन बन्न थालेको छ । कसैलाई भोकै मर्न नदिने सरकारको बोली व्यवहारमा उत्रिन सकिरहेको छैन । यस्तोमा केही धार्मिक तथा सामाजिक संघसंस्थाले भने मानवसेवामा राम्रै क्रियाशीलता देखाइरहेका छन् । तीमध्ये अग्रपंक्तिमा देखिएको एक संस्था हो बोधिसत्व विहार, जसले लकडाउनयता मात्रै एक लाखभन्दा बढीलाई निःशुल्क खाना खुवाइसकेको छ । बोधिसत्व विहार मानवसेवामा समर्पित बैद्धमार्गीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समूह हो । ताइवानमा मूल विहार रहेको बोधिसत्वका नेपाल, चीन, हङकङ, मलेसिया, भारत, अमेरिका, क्यानडा, सिंगापुर लगायत मुलुकमा शाखा छन् । यतिखेर बोधिसत्वका मूल गुरु हेगुवाङ शी नेपालमा छन् । लकडाउनअघि नेपाल आएका उनी अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएपछि यतै अड्किएका हुन् । यसै मौकामा नेपालमा समाजसेवी शान्त शर्मा लगायतको पहलमा 'लकडाउन सपोर्ट फुड च्यारिटी' सञ्चालन गरिएको हो, जसअन्तर्गत १७ अप्रिलदेखि उपत्यकाका १८ स्थानमा निःशुल्क भान्सा सञ्चालनमा छन् । फुड च्यारिटीको नेतृत्व गरिरहेका शान्त शर्माका अनुसार १७ अप्रिलदेखि बोधिसत्वले बाँसवासीस्थित सेन्ट्रल किचेनबाट मात्रै टिचिङ, कान्ति र गंगालाल अस्पतालका दैनिक १५ सयदेखि ३ हजार बिरामी तथा कुरुवालाई खाना र पानी खुवाइरहेको छ । यसका अतिरिक्त उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा श्रमिकहरुलाई लक्षित गरी ५ वटा ठूला र १३ वटा पकेट किचेन सञ्चालनमा छन् । ठूला किचेन सबैका लागि खुला रहन्छ भने पकेट किचेन निश्चित समूहकेद्रित छ । बोधिसत्व विहारले आफ्ना किचेनमा आउनेजति सबैको प्राथमिक स्वास्थ्यपरीक्षण गर्छ । उनीहरुलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा परामर्श दिन्छ । हालको महामारीबाट कसरी बच्नेदखि लिएर व्यक्तिगत अनि घरवरपरको सरसफाइबारे सचेत गराउँछ । मास्क लगाउनु र हात धुनुको महत्व सिकाउँछ । कुपोषणबारे चेतना र गर्भवतीलाई चाहिने स्वास्थ्य परामर्श दिइरहेको छ । बढ्दो संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अस्तिदेखि ठूला किचेन बन्द गरिएका छन् । यसअघि, २३ मार्चसम्ममा सबै किचेनबाट गरी १ लाख ३ छाक खाना खुवाइएको तथ्यांक शान्तसँग छ । शान्तका भनाइमा पकेट किचेन भने चलिरहने छ र त्यसलाई अझ विस्तार गर्ने उनीहरुको योजना छ । पकेट किचन विशेषगरी श्रमिकहरुका छाप्रे बस्तीमा केन्द्रित छ । बस्ती बस्तीमा रहेका यस्ता किचेनका लागि ग्यास, रासन, तरकारी लगायत सबै आवश्यक वस्तु विहारले उपलब्ध गराउँछ । पकाएर खाने काम भने उनीहरुले नै गर्नुपर्छ । यसभित्र सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने सुझावसहित स्वयंसेवकहरुले त्यसको निगरानी गर्ने गरेका छन् । हरेक पकेट किचेनमा शिशुहरुलाई उमेरअनुसार ल्याक्टोजिन र लिटो दिइन्छ । बालक तथा वृद्धलाई विहारले घरमै बनाएको २० पौष्टिक तत्वयुक्त सर्वोत्तम पिठो दिने गरेको छ । अहिले सुत्केरीलाई चाहिने जडीबुटीयुक्त औषधिको तयारी चल्दै छ । छिटै त्यसको वितरण सुरु हुने शान्त बताउँछन् । अर्कातिर बोधिसत्वले स्वास्थ्य शिक्षा र सुरक्षामा पनि काम गरिरहेको छ । ठाउँठाउँमा मानिसहरुको आधारभूत परीक्षण गरी स्वास्थ्य शिक्षा र परामर्श दिइरहेको छ । विभिन्न जिल्लामा पुगेर फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र पत्रकारलाई पिपिईसहित स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण गरिरहेको छ । लकडाउनका बेला सानो साने स्वास्थ्य समस्यामा अस्पताल धाउनु नपरोस् भनेर ठाउँ ठाउँमा आपत्कालीन प्राथमिक उपचार किट पनि वितरण गरेको छ । यसक्रममा बोधिसत्व विहारले नेपालगञ्जमा ५० सेट पिपिई, २० लिटर स्यानिटाइजर, स्यानिटाइजर स्प्रे मेसिन र २ थान थर्मल गन पठाएको छ । परासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पताललाई लागि ५ सेट पिपिई, ५०० थान मास्क र ५०० थान ग्लब्स सहयोग गरेको छ । थापाथलीस्थित प्रसूति गृहलाई ५ सेट पिपिई, १३०० मास्क र १०० जोडा ग्लब्स तथा सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारलाई २ सेट पिपिई, ३०० मास्क, ३०० जोडा ग्लब्स, १०० लिटर फिनाइल, ६० लिटर हार्पिक र एउटा थर्मल गन उपहार दिएको छ । शान्तकै नेतृत्वमा विहारले उपत्यका छिर्ने सबै मुख्य नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पिपिई, मास्क लगायत सुरक्षा सामग्री वितरण गर्दै छ । नागढुंगा र मुड्खु चेकपोस्टमा सिडियो कार्यालयका प्रतिनिधि राखेर सामग्री वितरण गरिसकिएको छ भने भक्तपुर र दक्षिणकाली नाकामा वितरण हुन बाँकी छ । बोधिसत्वले स्वास्थ्य तथा राहत सामग्री वितरण गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि वा सिडियो कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्ने गरेको छ । सरकारले लिएको एकद्वार नीतिलाई असर नपर्ने गरी प्रशासनसँगको समन्वयमा मात्रै काम गरिरहेको शान्त बताउँछन् । शान्त नेतृत्वको आपत्कालीन सेवा सञ्चालक समूहमा अनुप थापा, सागर थापा, एन्जेलिना थापा, निश्चल क्षेत्री, प्रमिला कार्की सिम्रन केसी लगायत छन् । उनीहरु यतिखेर किचेन सञ्चालनदेखि स्वास्थ्य तथा राहत सामग्री वितरणका काममा विभिन्न जिल्लामा खटिइरहेका छन् । खासमा बोधिसत्व विहारको उद्देश्य मानव मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणीजगत्को सेवा हो । अहिलेको लकडाउनमा विहारले स्वयंभू क्षेत्रका बाँदरहरुलाई दैनिक चना, बिस्कुट, फलफूल खुवाइरहेको छ । पाँच वर्षअघि महाभूकम्पपछिको राहतमा पनि विहारले सम्झन लायक काम गरेको थियो ।
अमेरिकी सेनाले वुहानमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाएको चीनको दाबी
काठमाडौं, ३० फागुन । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले वुहानमा कोरोना भाइरस अमेरिकी सेनाले संक्रमण फैलाएको दाबी गरेका छन् । उनले शुक्रबार ट्विटमार्फत कोरोना इपिसेन्टर भनिएको हुबेइ प्रान्तको सेन्ट्रल वुहानमा नोभेल कोरोना भाइरस अमेरिकी सेनाले ल्याएको दाबी गरेका हुन् ।
जाओले आफ्ना दुई लाख ८७ हजार फलोअर्सलाई क्यानडास्थित षड्‌यन्त्र फैलाउने वेबसाइटले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै कोरोना भाइरस चीनको वुहानमा नभएर अमेरिकाबाट सुरु भएको कुरा शेयर गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले वुहानको सी फुडबाट कोरोनाको संक्रमण नफैलिएको पनि दाबी गरेका छन् ।
मैले विश्वास गरेका धेरै कुराहरु एकाएक आश्चार्यजनक तरिकाले परिवर्तन भएका छन्,ू उनको आधिकारीक ट्विटमा लेखिएको छ । तर, बेइजिङस्थित अमेरिकी दूतावासले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
अमेरिकी सेना गत अक्टोबरमा अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक विश्व खेलकुदका लागि वुहानमा गएको थियो । उक्त कुरालाई जोड्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
अहिले विश्वभरमा १२७ मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सीसीयूमा भर्ना
भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका आज साँझदेखि खुल्दै
आज हरिबोधिनी एकादशीः तुलसीको विवाह गरी मनाइँदै
आङ सान सुकी नेपाल आउने
जापानी सम्राट् नोरुहितोको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी जापान प्रस्थान
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा एनआरनएनए विश्व सम्मेलनको उद्‍घाटन
अस्पतालबाट निकालेर सभामुख महरालाई लगियो अदालत
आज प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन नगर्ने
कम्युनिष्टको अधिनायकवाद स्वीकार्य छैनः नेता केसी
मोदी र ओलीद्वारा दक्षिण एशियाकै पहिलो अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले गरे भक्तपुर दरबार स्वायरको अवलोकन भ्रमण
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण गर्ने पक्का
समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्षमा रुपनारायण श्रेष्ठ
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौँ आइपुगे
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पुनः सिङ्गापुर जाँदै प्रधानमन्त्री ओली
पचास पदका लागि उपनिर्वाचनः ४० करोड खर्च
सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण सकेर आज स्वदेश फकर्दै प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री ओली भोलिमात्रै स्वदेश फर्कनुहुने
नेपाली कांग्रेसका नेता सिंह अस्पताल भर्ना
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ‘सन्देश संग्रह’ सार्वजनिक
बाढी पहिरोसम्बन्धी संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव
मन्त्री पण्डितको राजीनामा माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा प्रर्दशन
प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षले दिए राजीनामा
ठमेल परिषद्को सल्लाहाकारमा थपलिया, राजभण्डारी र गुरुङ मनोनित
नुवाकोट कांग्रेसले बुझाए ज्ञापन पत्र
नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन भोलि प्रकाशनमा जाने
असार २२, काठमाडौ । पटकपटक छलफल भए पनि कहिले प्रकाशनमा जाने टुंगो नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको टुंगो लागेको छ । भोलि नै प्रतिवेदन प्रकाशनमा जाने भएको छ ।
दुई दर्जनभन्दा बढी पर्यटन व्यवसायी नेकपामा प्रवेश
असार २०, काठमाडौं । तत्कालीन नयाँ शक्ति नेपाल निकट रहेका वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायीहरु सागर पाण्डे, गोकुल केसी, बि.एन. ढकाल तथा पर्यटन व्यवसायीहरु बाबुकाजी सिटौला, किरण धरेल, बाबुराम पोखरेल, प्रकाश देवकोटा, सफल अधिकारीलगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीहरुले आज शुक्रबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेका छन् ।
आइफा अवार्ड नेपालमै हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली
असार २०, काठमाडौं । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा शुक्रबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०औँ संस्करणको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकाडेमी अवार्ड (आइफा) नेपालमै हुने बताएका छन्। नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आइफा अवार्ड नेपालमा गर्न वार्ता चलिरहेकाले कसैले अनधिकृत निर्देशन दिँदैमा नरोकिने स्पष्ट पारे।
तत्कालीन नयाँ शक्ति नेपाल सम्बद्ध पर्यटन व्यवसायीहरु भोलि नेकपा प्रवेश गर्दै
असार १९, काठमाडौं । नयाँ शक्ति पार्टी निकट रहेका पर्यटन व्यवसायीहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रवेश गर्ने भएका छन् । वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायीहरु सागर पाण्डे, गोकुल केसी, बि.एन. ढकाललगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीहरुले नेकपा प्रवेश गर्ने जानकारी गन्तव्य नेपालले पाएको छ । उनीहरु भोलि धूमबाराहीमा रहेको नेकपाको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर पार्टीमा प्रवेश गर्दैछन् ।
दीपक मनाङे नेकपामा प्रवेश
असार १९, पोखरा । मनाङ जिल्लाबाट प्रदेश सांसदमा स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित प्रदेश सांसद दीपक मनाङ्गे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेका छन् ।
मिडिया बिद्येयकबिरुद्ध उत्रिन गगन थापाको आह्वान
एनसेल कर मुद्धामा आजबाट बहश हुने
संसदको बर्षे अधिवेशन बैशाख १६ गतेलाई बोलाईयो
५ संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष नियुक्त, शीतल निवासमा शपथग्रहण
७ चैत्र, काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ वटा स‌ंवैधानिक आयोगमा अध्यक्षहरुको नियुक्ति गर्नुभएको छ ।
बिरामी पत्नी सीताको उपचारका लागि प्रचण्ड आज अमेरिका जाँदै
३ चैत्र, काठमाडौं । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइतबार साँझ अमेरिका प्रस्थान गर्दैछन्। लामो समयदेखि बिरामी रहेकी पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि प्रचण्ड र साथमा छोरी गंगा तथा सीताको हेरचाह गरिरहेकी एक नर्स पनि अमेरिका जाँदैछन्। पत्नीको उपचारका लागि प्रचण्ड अमेरिकामा १० दिन रहनेछन्।
सीके राउतसँगको सहमतिमा शंका नगर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह
फागुन २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीके राउतसँगको सहमतिमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
विप्लव समूह लुटेरा समूहः प्रधानमन्त्री ओली
फागुन २४, फागुन । शुक्रवार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित राजनीतिक सहमति कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा ‘विप्लव समूहलाई ‘लुटेरा समुह’ को संज्ञा दिएका छन् ।
सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर
फागुन २४, काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित विशेष घोषणा सभा कार्यक्रममा आज सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । दुई पक्षबीच ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो ।
पर्यटनमन्त्री र पूर्वअर्थमन्त्रीका काम बिर्सनै नसक्नेः प्रधानमन्त्री ओली
फागुन २३, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ज्यान गएका सात जनासँगै दिवंगत अर्का नेता भरतमोहन अधिकारीको संयुक्त रुपमा श्रद्धाञ्जली सभा बिहिबार सम्पन्न गरेका छन्।
विप्लवको गाउँमा प्रहरीको छापाः ठूलो संख्यामा हतियार बरामद
फागुन २३, बुटवल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्दको गाउँ कपिलवस्तुबाट ठूलो संख्यामा हातहतियार र बिस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ ।
सुखानी स्मृति शहीद दिवसमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली झापामा
फागुन, २१ भद्रपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुखानी स्मृति शहीद दिवसमा सहभागी हुन झापा आइपुग्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा शोक प्रस्ताव पारित, अर्को बैठक शनिबार बस्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
टुँडिखेलमा श्रद्धान्जलीका कार्यक्रमः शुभेच्छुक र नेकपा कार्यकर्ताको वाक्लो उपस्थिति
काठमाडौं । बुधबार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सात जनाको टिचिङ अस्पतालमा पोस्टमार्टम भइरहेको छ ।
नेवि संघको प्रदर्शन जारी
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघका नेता कार्यकर्ताहरुले कांग्रेस पार्टी कार्यालयबाहिर आज पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् । मंगलबार असन्तुष्ट विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्दा ३२ वर्षमूनिको उमेर सूमहबाटै चयन गर्नुपर्ने र गुटबन्दीको अन्त्य गर्न विधी पद्धतिको लागु हुनुपर्ने भन्दै नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।
संसद् भवनमा दुई करोड ७८ लाखको सुविधा सम्पन्न क्यान्टिन बन्ने
काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिमा सुविधा सम्पन्न चमेनागृह ९क्यान्टिन०को निर्माण शुरु भएको छ ।
प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य वलीको मृत्यु
काठमाडौँ । प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ ।
प्रजातन्त्र दिवसको दिन देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ ‘६९औँ प्रजातन्त्र दिवस’ मनाइँदै
काठमाडौं । एक सय चार वर्षको जहानियाँ राणा शासन अन्त्य भई देशमा प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन फागुन ७ । सोही दिनको स्मरण गर्दै आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ ‘६९ औँ प्रजातन्त्र दिवस’ मनाइँदैछ ।
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघले पार्टीले निर्माण गर्न लागेको तदर्थ समितिमा ३२ वर्षे उमेरहद लगाउन माग गरेको छ ।
नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १ बर्ष पुगेसँगै ललितपुरको एकान्तकुनामा प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार पानी जहाज कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ । एकान्तकुना स्थित चक्रपथ सुधार आयोजनाको कार्यालयलाई पानीजहाज कार्यालय बनाइएको छ । उहाँले सो भवनको उद्घाटन गर्दै समुन्द्र सबैको साझा भएकाले त्यसमा नेपालले पनि आफ्नो पानीजहाज कुदाउने बताउनु भयो ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पूरा, आज देशबासीको नाममा सम्वोधन गर्दै
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ ।
यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (बिहीबार) देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दैछन् ।
काठमाण्डौ । नेपाल र भारतबीच २०४७ सालमा भएको वाणिज्य सन्धिमा जलमार्ग अर्थात् इनल्याण्ड वाटरबेज् समावेश गर्न दुवै देशका अधिकारीबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।
नेता अधिकारी ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई थप उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा पुनः भर्ना गरिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त तीन राजदूतलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ ।
सरकार विरुद्ध कांग्रेसले आज देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारको विरोधमा आज ७७ जिल्लामा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ । वरिष्ठ नेताको कमाण्डमा नै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापीरुपमा प्रदर्शन गर्ने भएको हो ।
दीपक मनाङेले लिए सपथ
काठमाडौं । गुण्डानाइके भनेर चिनिने दीपक मनाङ्गे भनेर चिनिएका राजीव गुरुङले प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिएका छन् । सोमबार गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सभामुख नेत्र अधिकारीले मनाङेलाई सपथ गराएका हुन् ।
विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकका लागि प्रधानमन्त्री ओली आज डावोस जाँदै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन आइतबार स्विट्जरल्यान्डको डावोस जाँदै छन्। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली आइतबार साँझ ८ बजे कतार एयरवेजमार्फत त्यसतर्फ जान लागेका हुन्।
थाइल्यान्ड र फ्रान्सका लागि राजदूत अनुमोदित
काठमाडौं । गणेशप्रसाद ढकाल थाइल्यान्डको राजदूतमा र दीपक अधिकारी फ्रान्सको राजदूतमा अनुमोदित भएका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबारको बैठकले दुवैको नाम अनुमोदन गरेको हो।
सांसद उषाकला राईले आमाको काज–किरिया लागि केशमुण्डन
काठमाडौं । सांसद उषाकला राईले आमाको काज–किरिया लागि केशमुण्डन गरेकी छन्।
उनकी आमा लक्ष्मी राईको ७५ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएपछि सांसद राई काज–किरियामा लागेकी हुन्। काज–किरियामा खटिएकी सांसद राईको उनका श्रीमान् पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङले प्रसंसा गरेका छन्।
रायसिना संवादको चौथो संस्करणमा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली आज नयाँ दिल्ली जाँदै
काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आज भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ ।
रायसिना संवादको चौथो संस्करणमा सहभागी हुन मन्त्री ज्ञवाली नयाँ दिल्ली जान लाग्नुभएको हो । अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेशन र भारतीय विदेश मन्त्रालयको सहकार्यमा रासयिना संवादको आयोजना हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनोबीच भेटवार्ता भएको छ । नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका कोनोले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार भेटेका हुन् ।
कांग्रेस नुवाकोटद्वारा घ्याङफेदीमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई सहयोग
नुवाकोट । मिनीट्रक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई राहत स्वरुप नेपाली कांग्रेस नुवाकोटले प्रति मृत्तक व्यक्तिका परिवारलाई ५ हजार रुपैया सहयोग गरेको छ ।
नेविसंघको टोलीले खेले रानीपोखरीमा फुटबल
काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू विकासको सूचीमा रानी पोखरीलाई फुटबल मैदान बनाएको कुरा छुटेछ नि’ उल्लेख गरिएको ब्यानरसहित नेविसंघको टोलीले मंगलबार दिउँसो रानीपोखरीमा सरकारलाई व्यंग्य गर्दै फुटबल खेलेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले मुलुकको विकास निर्माण र सुशासनको दुरावास्थाप्रति व्यंग्य गर्दै रानीपोखरीमा फुटबल खेलेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको वचनः निर्मलालाई न्याय अराजक भिडले होइन, यही सरकारले दिन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्मला पन्त र उनको परिवारलाई छिट्टै न्याय दिने बताउनु भएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक बाँकी कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ।
संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेपछि प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले संसद बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। बैठक अबरुद्ध गरिएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।
काठमाडौँ । सरकारले ७५३ वटा स्थानीय तहको प्रारम्भिक वर्गीकरण गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका आधारमा चार वर्गमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
गुणस्तरहीन भएपछि गाउँपालिका प्रमुखले नै भत्काए आफ्नै कार्यालय
काठमाडौँ । रावाबेंसी गाउँपालिकाको निर्माणाधीन कार्यालय भवन गुणस्तरहीन बनेको भन्दै गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले भत्काएका छन् । तीन महीनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी शुभ एण्ड ध्रुव कन्ट्रक्शन प्रालिले निर्माणको काम थालेको कार्यालय भवन गुणस्तरहीन बन्दै गएपछि सम्पन्न नहुँदै गाउँपालिका प्रमुख निरौलाले कोदालोले खनेर भत्काएका हुन् ।
रेशम चौधरीले लिए सांसद पद तथा गोपनियताको सपथ
काठमाडौं । रेमश चौधरीले सांसद पदको सपथ लिएका छन् । चौधरीलाई सभामुख कृष्णबहादुर महराले पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएका हुन् ।
नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश जबराद्वारा शपथ
काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले शपथ लिएका छन् । शितल निवासमा बुधबार बिहान एक समारोहबीच जबराले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका हुन् । उनी मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदित भएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर राणा
काठमाडौं । सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वसम्मत अनुमोदन भएका छन्।
राजसंस्थाको पक्षमा उभिने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको दाबी
पोखरा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली कांग्रेस एक दिन हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा उभिने दाबी गरेका छन् । राप्रपाको गण्डकी स्तरीय सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै थापाले कांग्रेसले ढिलो चाँडो राजसंस्थालाई अंगिकार गर्ने विश्वास ब्यक्त गरेका हुन् ।
नेताहरुबीच विधानमा सहमति नजुट्दा कांग्रेसको महासमिति बैठक तीन दिन लम्बियो
काठमाडौं । शनिबारदेखि काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक अझै तीन दिन लम्बिने भएको छ । विधानमा सहमति जुट्न बाँकी रहेकोले बैठक पर्सिसम्म जारी रहने कांग्रेसले जनाएको हो ।
कांग्रेस महासमिति सदस्यहरुद्वारा छुटाछुट्टै प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका १० भाइ युवा महासमिति सदस्यहरूले महासमिति बैठकमा छलफलका लागि भन्दै ६ पृष्ठ लामो प्रस्ताव सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पेस गरेका छन्। प्रस्तावमा उनीहरूले संघीय, प्रदेश, जिल्ला र क्षेत्रीय स्तरमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
११ जना पदाधिकारी राख्नेमा नेपाली कांग्रेसको सहमति
काठमाडौं । सभापतिसहित दुई उपसभापति, तीन महामन्त्री, चार सह–महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी ११ जना पदाधिकारी संख्या पुर्‍याउने नेपाली कांग्रेसको सहमति भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांगे्रसका प्रतिनिधिहरुले आर्थिक, राजनीतिक र विधान सम्बन्धी थप प्रस्ताव राख्ने भएका छन् ।
प्रदेश नं १ बाट सुभाष पोखरेल, प्रदेश नं २ बाट रंजित कर्ण, प्रदेश नं ३ बाट रमेशकुमार महत, विनोद कायस्थ, नरोत्तम वैद्य, विनिता अिधकारी, प्रदेश नं ४ बाट नवराज गुरुङ्ग, प्रदेश–५ बाट निरञ्जन सिं सिजापती, प्रदेश नं ६ बाट राजिव विक्रम शाह, र प्रदेश नं ७ बाट भरत बहादुर खड्काका साथै जनसम्पर्क समिति जापानबाट चिरञ्जीवि थापाले थप प्रस्ताव राख्ने भएका हुन् ।
कांग्रेस महासमिति बैठकको बन्द सत्र सुरु
काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति बैठकको बन्द सत्र सुरु भएको छ।
बन्द सत्रमा महामन्त्री डा शशा‌ंक कोइरालाले ‘साङ्ठनिक प्रतिवेदन’, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीको ‘लेखा प्रतिवेदन’ र सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पार्टीको ‘आर्थिक प्रस्ताव’ पेश गरेका छन्।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक शनिबार काठमाडौमा सुरु हुँदैछ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने आफ्नो सङ्कल्पलाई सूक्ष्मरुपमा हेर्न मिल्ने चस्मा (म्याग्निफाइड ग्लास) लगाएर हेरिदिन नागरिक समाजलाई आग्रह गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यवद्ध नागरिक समाजका तर्फबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि आज सिंहदरबारमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने प्रतिवद्धता दोहोर्याउनु भएको हो ।
एशिया प्यासेफिक समिट आजदेखि सुरु
काठमाडौं। एशिया प्यासिफिक समिट काठमाडौंमा शुक्रबार सुरु हुँदैछ । समिटमा सहभागी हुन आज पनि विभिन्न देशका विशिष्ट पाहुनाहरू आउँदैछन् ।
प्रधानमन्त्री सेन र विदेशमन्त्री सुकी काठमाडौंमा
काठमाडौं । एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनमा भाग लिन कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन र म्यानमारकी स्टेट काउन्सुलरसमेत रहेकी विदेशमन्त्री आङ साङ सुकी काठमाडौं आइपुगेका छन्।
आन्दोलनले नभएपछि त्रिचन्द्र कलेजमा तालाबन्दी
काठमाडौँ । शुल्क वृद्धि फिर्ता गर्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका त्रिचन्द्र कलेजका विद्यार्थीहरुले मंगलबार तालाबन्दी गरेका छन् ।
कांग्रेसको जिल्ला सभापति भेला भोलि हुँदै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति भेला भोलि पर्यटकीय नगर कंकनीमा हुने भएको छ ।
नुवाकोट कांग्रेस सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले अबको भेलाले कांग्रेसलाई एकजुट बनाउन सहयोग पु¥याउने धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, यसै भेलामा कांग्रेसको विधानलाई समग्र पक्षमा छलफल गरी सबैको साझा धारणा बनाइने बताए ।
नेविसंघको महाधिवेशन पुस २८ गते हुँदै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ ९नेविसंघ०ले पुस अन्तिम साता केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार डडेल्धुरामा भएको बस दुर्घटनाको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति भेलाको तयारी तीव्र रुपमा अगाडी बढ्दै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आगामी मंसिर १२ र १३ हुने जिल्ला सभापति भेलाको तयारीले तीव्र गति लिइरहेको छ । जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीका हरेक संरचनामा ८५ प्रतिशत निर्वाचनको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अर्थसमितिको आज बिहान ९ बजेका लागि निर्धारित बैठक सदस्यको न्यूनतम उपस्थिति सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगन भएको छ । बैठकमा पूँजीगत खर्च र गैरबजेटरी निकासाबारे छलफल हुने कार्यक्रम थियो ।
कोरियाली राजदूतलाई गरे एमालेका नेताले विदाइ
काठमाडौं । नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत किम योङ्ग हाकले मंगलबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग विदाइ भेट गरेका छन् ।
बुधबार विहान नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका उनले आफू ४ बर्ष ९ महिना नेपालमा बस्दा यहाँको राजनीतिक नेतृत्व र नेपाली जनतालाई मैत्रीपूर्ण र हार्दिक पाएको उल्लेख गरे ।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बस्दै, महासमिति बैठक सार्नेः मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म हुने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आज बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको महासमिति बैठकको मिति सार्ने भएको छ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरः अब १५ हजारमै मलेसिया जान पाइने
काठमाडौं । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच मलेसियामा काम गर्ने जाने नेपाली कामदारलाई दिइने सेवासुविधासहितको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
अफ्रिकी मुलुक इथियोपियामा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति चयन भएकी छन्।
इथियोपियाको संसदले बिहीबार साहले वर्क ज्वदेलाई नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित गरेको हो।
निवर्तमान राष्ट्रपति मुलाटु टेसोमले राजीनामा दिएपछि जेवडे नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित भएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली कोस्टारिकामा, उपराष्ट्रपतिको स्वागत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोस्टारिकाका राष्ट्रपति कार्लोस अल्भाराडो क्वेसाडाको निमन्त्रणामा कोस्टारिकाको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा सान होजे पुगेका छन्। उनलाई सान होजेको हुँवा सान्तामारिया अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति एप्सी क्याम्बेल बारले स्वागत गरिन्। प्रधानमन्त्रीका साथमा धर्मपत्नी राधिका शाक्य पनि रहेकी छन्।
नेपालको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य अभिप्रेरणा बन्नसक्छः प्रधानमन्त्री ओली
न्यूयोर्क । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन शान्तिपूर्ण तथा प्रजातान्त्रिक सङ्क्रमणको विश्वकै लागि मौलिक उदाहरण भएको बताएका छन्। उनले ‘वार्ताले मतभेद पराजित गर्छ र मतले गोलीलाई पराजित गर्छ’ भन्ने भनाइको साक्षी–बयानको रुपमा नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई प्रस्तुत गर्न सकिने पनि बताए।
नेपालचीन–बीच ऊर्जा संयन्त्रको बैठक सुरू
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग र साझेदारीलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ शुक्रबारदेखि ऊर्जा संयन्त्रको बैठक सुरु भएको छ।
पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ वरिष्ठ नेता पौडेल
तनहुँ । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले व्यक्तिलाई होइन संगठनका कामलाई प्राथमिकता दिएर पार्टीलाई बलियो र सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
म्यानमाकी प्रथम महिला चो चोले पाटन दरबार क्षेत्रमा
चोले पाटन सङ्ग्रहालय रहेको केशवनारायण चोक, मू
चार देशका राष्ट्रप्रमुख आजै स्वदेश फर्कने, वाङचुक शनिबार र सिरिसेना आइतबार मात्रै फर्कने
काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० चौथो सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरुमध्ये ४ जना आजै फर्कने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, म्यानमार राष्ट्रपति विन मिन्ट र थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत व चा शुक्रबार नै भएका हुन् ।
अतिथिको सुरक्षा, व्यवस्थापनको लागि सवारीसाधनमा जोर बिजोर प्रणाली
काठमाडौं । बिमस्टेक शिखर सम्मेलनका कारण काठमाडौं उपत्यकामा तीन दिन निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई जोर बिजोर प्रणाली अन्तर्गत सञ्चालन गरिँदैछ ।
बिम्स्टेक सम्मेलनका लागि पाहुना आउने क्रम सुरु, १७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौं। बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि आजबाटै विशिष्ट पाहुना नेपाल आउनेक्रम सुरु भएको छ । जसले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि शनिबारसम्म प्रभावित हुने भएको छ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मिनी संसद् भनेर चिनिने विभिन्न संसदीय समितिहरू अहिले नेतृत्वविहीन छन् ।
गुटबन्दीले नेता कार्यकर्ता विभाजित लोकतन्त्र धरापमा, – महामन्त्री कोइराला
नेपालगञ्ज । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रको गुटबन्दीले नेता, कार्यकर्तालाई विभाजित गरेको भन्दै यो अवस्था रहेसम्म पार्टी बलियो हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा रेडियो नेपालको जग्गा रेडियो नेपाललाई नै फिर्ता गर्न जोड दिइएको छ ।
सदनमा उठ्यो करको कुराः सङ्घीय शासन प्रणालीमा आँच आउने काम नगर्न सांसदहरुको आग्रह
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले देशव्यापी रुपमा स्थानीय तहबाट मनोमानी कर वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा कानूनी राज्य स्थापना हुनेः मुख्यमन्त्री भट्ट
धनगढी । आजबाट लागू भएको मुलुकी देवानी तथा फौजदारीसम्बन्धी संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा कानूनी राज्य स्थापना हुनेमा जोड दिइएको छ । मुलुकी देवानी फौज्दारीसम्बन्धी संहिता लागू भएको अवस्थामा प्रदेश नं ७, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तरक्रियाका वक्ताहरुले नयाँ कानूनलाई हरेक व्यक्तिले आ–आफ्नो नैतिकता र आचरणसँग जोड्दै सफल कार्यान्वयन गर्ने÷गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
आजबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहितामा छन् यस्ता विशेषताहरु
बामाको । मालीका राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबाकर केइटा थप एक कार्यकालका लागि फेरी निर्वाचित हुनुभएको छ ।
ओली र प्रचण्ड भदौ २ गते मधेस भ्रमण गर्दै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भदौ २ गते मधेस जाने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रदेश २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्नुका साथै बरमझियामा सहिद रामवृक्ष यादवको स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीका साथमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि बरमझिया जाने तयारी रहेको छ ।
पाकिस्तानको ७१ औँ स्वतन्त्रता दिवस
काठमाडौं । पाकिस्तानको ७१ औँ स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आज यहाँस्थित राजदूतावासमा विशेष समारोह आयोजना गरी उक्त देशको राष्ट्रिय झण्डा फहराइयो ।
राष्ट्रपतिको ज्यान लिन खोजे जन्म कैद, अपहरण गरे १५ वर्षसम्म कैद
काठमाडौं । मुलुकी ऐनको दफा ५७ राष्ट्रपति उपर आक्रमण प्रतिवन्ध लगाइएको छ ।
ऐनअनुसार कसैले राष्ट्रपतिको ज्यान लिन वा ज्यान लिने उद्योग गरे जन्म कैद, राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरे वा गराए वा शरीर बन्धक लिन वा लिन लगाए १० देखि १५ वर्षसम्म कैद, कसैले राष्ट्रपतिमाथि कुनै किसिमले आक्रमण गरे वा गराए ५ देखि १० वर्षसम्म कैदको सजाय तोकिएको छ । घटनाबारे उजुरी जहिले पनि लाग्ने छ ।
उच्चस्तरीय भेटवार्ताका लागि प्रचण्ड भारत जाँदै
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भदौ तेस्रो साता भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
जोरपाटी–साँखु सडकखण्डको काम तत्काल सक्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशन
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माधवकुमार नेपालले जोरपाटी–साँखु सडकखण्डको काम तत्काल सक्न निर्देशन दिनु भएको छ ।
विप्लव माओवादीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पक्राउ
काठमाडौं । बुधबार दिउँसो राजधानीबाट नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
नेकपाको सचिवालय वैठक पुनः भोलि अपरान्ह २ बजे बस्ने गरी स्थगित
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको बुधवार बसेको सचिवालय वैठक पुनः भोलि अपरान्ह २ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय वैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धका बारेमा जानकारी दिनुभएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिः बैठक स्थगित
काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न बसेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगन भएको छ ।
विराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले वर्तमान सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरण गर्नका लागि अझै समय दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं । नेपालस्थित भारतीय दूतावासअन्तर्गतको विराटनगर क्याम्प कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवा आजदेखि बन्द भएका छन् ।
धार्मिक प्रतिष्ठानको विकासमा सरकार प्रतिबद्धः मुख्यमन्त्री
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले धार्मिक प्रतिष्ठानको विकास, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं । भावी प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेन ।
काठमाडौं । नेपालको सामाजिक विकासमा चिनीयाँ सरकारले विभिन्न परियोजनामार्फत सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बुटवल । प्रदेश नं ५ मा आज विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोेधका कारण प्रदेशसभाको बैठक स्थगन भएको छ ।
नुवाकोट । नेपाली काँग्रेसका पुराना नेता विष्णुबहादुर आचार्यको गए राति ६३ वर्षका उमेरमा पाचक ग्रन्थीको अर्बुदरोगबाट निधन भएको छ ।
प्रक्रियाअनुसार चिकित्सा विधेयक अघि बढ्छः सचेतक गुरुङ
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ संसदीय प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आज कम्बोडिया प्रस्थान गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण आजको राष्ट्रियसभाको बैठकस्थगन भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपालका लागि नवनियुक्त जापानी राजदूत मासामिची साइगोसङबीच भेटवार्ता भएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भेटी अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिले पूर्णता पाएको छ ।
बाँके । जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका समर्थक र प्रहरीबीच बिहीबार भएको झडपमा परी गम्भीर घाइते प्रहरीलाई थप उपचारका लागि आज काठमाडौँ पठाइएको छ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिहीबार भएको झडपमा परी गम्भीर घाइते प्रहरी जवान कमलप्रसाद आचार्यको नर्सिङहोम नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको थियो ।
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २१ दिनदेखि आमरण अनशनरत चिकित्सक डा गोविन्द केसी पक्ष र नेपाल सरकारबीचको वार्ता अनिश्चित भएको छ । जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा २० दिनसम्म अनशन बस्नुभएका डा. केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था खराब भएपछि जीवनरक्षा र उपचारका लागि बिहीबार हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइए पनि मागका सम्बन्धमा वार्ताबारे अन्योल देखिएको छ ।
आफ्ना समर्थकहरु कुटिएपछि डा. केसी काठमाडौँ जान तयार
डा. केसीलाई लिन हेलिकोप्टर पठाइयो
काठमाडौं । बीस दिनदेखि जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि काठमाडौँ ल्याउन सरकारले आज बिहान हेलिकोप्टर पठाएको छ ।
काठमाडौं । बिहिबार आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु बन्द हुने भएको छ । नेपाल चिकित्सक संघले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त कुराको जानकारी दिएको हो ।
आकस्मिकबाहेकका अरु सबै सेवा ठप्प
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरु हडतालमा उत्रेका छन् । १४ दिनदेखि जुम्लामा अनशनरत अनशनरत डा.गोविन्द केसीको माग सम्बोधनको पक्षमा रहेका उनीहरुले केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै आजदेखि हडताल थालेका हुन् ।
प्रज्ञाभवन २०५ औँ भानुभक्त जयन्ती
काठमाडौं । २०५ औँ भानुभक्त जयन्तीको अवसरमा भानु प्रतिष्ठानले प्रज्ञाभवन कमलादीमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली भाषा र साहित्यको माध्यमबाट नेपाललाई एकताबद्ध गरेको बताएका छन्। उनले नेपाली साहित्य र समाजमा भानुभक्तको योगदान असाधारण र कालजयी रहेको धारणा राखे।
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नियमावलीलाई अन्तिमरुप दिनका लागि सचिवालयको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।
सिंहदरबार बाहिर धर्ना, धर्ना बसेकाहरु पक्राउ
काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति डा. गंगाधर अधिकारी, सल्लाहकार होमकान्त चौलागाई, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, उपसभापति रेनुका पौडेलसहित २५ जनालाई पक्राउ परेका छन् । सरकारले स्वतन्त्रता विरोधी निर्णय र स्वेच्छाचारी गतिविधि गरेको भन्दै सिंहदरबार बाहिर धर्नामा बसेका उनीहरु प्रक्राउ परेका हुन् । उनीहरुलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदबारमा राखिएको छ ।
कांग्रेसले दर्ता गरेको प्रस्ताव कार्यसुचिमा नपरेपछि संसद अवरुद्ध
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको सन्दर्भमा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव आजको प्रतिनिधि सभाको कार्यसुचीमा नपर्दा संसद अवरुद्ध भएको छ ।
सात प्रदेश प्रमुख पनि हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
काठमाडौं । बुधबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेको कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए।
सरकार होइन डा. केसीको शैली अधिनायकवादी : गृहमन्त्री थापा
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले अनसनका भरमा स्वास्थ्य नीति बनाउन खोज्नु अधिनायकवादी शैली भएको बताएका छन् । संसदलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री बादलले डा. गोविन्द केसीलाई गिरफ्तार नगरिएको र विरोध गर्न रोक नलगाएको बताए ।
काठमाडौं । गृहमन्त्री उपस्थित नभएपछि प्रतिनिधिसभामा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल स्थगित भएको छ ।
काठमाडौं । संघीय संसदले संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली बहुमतले पारित गरेको छ ।
हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा नम्बर एक बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काङ्गेस नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसीले पार्टी नेतृत्व धुर्तराष्ट्र जस्तो भएको भन्दै विनाशको बाटोमा नजान नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू हुन्छ : प्रचण्ड
पोखरा । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू गर्ने सोचका साथ अगाडि बढेको बताएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम आजै सरकारमा जाँदै
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल दुई मन्त्रालयसहित आज सरकारमा सहभागी हुने टुङ्गो लागेको छ।
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच सरकारमा सहभागि हुने विषयमा सहमति भएको छ। सोमबार दुई दलबीच भएको वार्तमा यस विषयमा सहमति जुटेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ९ जनाको सचिवालय हुने
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भइ बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ९ जनाको सचिवालय हुने तय भएको छ।
एमाले र माओवादी पार्टी एकता घोषणा गर्न सहमत
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकता गर्न सहमत भएका छन् । बिहीबार एकीकृत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् ।
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरबाट काठमाडौं आइपुगेका छन् । दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रबार बिहान १० बजे जनकपुर आइपुगेका मोदी दिउँसो साढे तीन बजे काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
प्रदेश २ मा १ अर्ब सहायता दिने मोदीको घोषणा
मोदीद्वारा ओली र नेपालको प्रशंसा
जनकपुर । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जानकी मन्दिरको दर्शनपछि सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारको प्रशंसा गरेका छन् ।
मोदीको स्वागतमा घर अगाडि कलश राख्न अपील
जनकपुरधाम । प्रदेश २ को सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आगमनका क्रममा घरघरमा कलश राखेर स्वागत गर्न सार्वसाधारणलाई अपील गरेको छ ।
पार्टी एकताको लागि एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने
काठमाडौं । पार्टी एकताका विषयमा छलफल गर्न नेकपा एमालेले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकताका विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइएको एमाले पार्टी कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन वैशाख २३ गते बोलाउन राष्ट्रपतिलार्इ सिफारिस गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको शुक्रवार बसेको बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिलार्इ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वाम एकता सफल पार्न चुनौति : प्रचण्ड
रौतहट । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले र माओवादी बिचको विदेशी शक्ति पनि एकता प्रक्रिया भाड्न लागिरहेको बताएका छन् । एकता प्रक्रिया लम्बिरहेको बेला प्रचण्डले एकता सफल पार्ने चुनौति रहेको धारणा राखे ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकता घोषित समयमा नभएर अघोषित मितिमा हुने बताएका छन् ।
काठमाडौं । कार्यकर्ता उग्ररुपमा प्रस्तुत भएपछि वाम एकता दिवसको कार्यक्रममा राखिएको मुख्य ब्यानर झिकिएको छ।
गुल्मी । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले बुधबार गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाले आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै उनले कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सामाजिक विकासका क्षेत्रमा नयाँ ढंगले नीति तथा कार्यक्रम बनाइ जनताको सेवा गर्न चाहेको बताएका छन् ।
वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने गरी तयारी तिब्र बनाउने संयोजन समितिको निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले र माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक सकिएको छ ।
काठमाडौं । कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समिति बैठक आज बस्दै छ।
सिन्डिकेट गर्नेको जालो सरकारले तोड्छ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमवार गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै देशभित्र हुने गरेका सिन्डिकेटहरु जनता र नागरिक समाजसँग मिलेर तोड्ने बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी राज्यमन्त्रीलाई
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारी राज्यमन्त्री पद्मा अर्याललाई दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली सँगै रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब राज्यमन्त्री अर्यालले पूर्णरुपमा पाएकी छन् ।
ईयूले अधिकार क्षेत्र नाघ्यो : कांग्रेस
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा युरोपियन युनियन (इयु)को निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।
राष्ट्रपतिले संघीय संसदमा १५ गते सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदलाई १५ गते सम्बोधन गर्ने भएकी छन् ।
एमाले र माओवादीको संयुक्त बैठकमा ओली र प्रचण्डले सम्वोधन गर्ने
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको आज संयुक्त रुपमा संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ । पार्टी एकता प्रक्रिया जारी रहेका बेला रणनीतिक मुद्दामा फरक फरक बैठक नराख्न दोस्रो तहका नेताहरुले दिएको सुझाव अनुसार संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्न लागेको हो।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सभामुखका लागि कृष्णबहादुर महराको मात्र उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्, भने औपचारिक घोषणा भने भोलि हुनेछ ।
राष्ट्रपतिमा भण्डारीको उम्मदेवारी दर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएकी छिन्। राष्ट्रपतिका साथमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललगायत उम्मेदवारी दर्तामा पुगेका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचन बारे कांग्रेसले छलफल गर्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपतिको भोली उम्मेदवारी दिने विषयमा छलफल गर्न बुधबार विहान नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाएको छ ।
संविधान संशोधनमा सहयोग गर्छु : देउवा
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले आज संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बधाई दिँदै संविधान संशोधनमा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन् । देउवाले ४४ मत पाए भने प्रकाशमान सिंहले १९ मत पाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले लिए सपथ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । संसद भवनमा आयोजित कार्यक्रममा जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले सांसदहरुले सपथ दिलाएका हुन् ।
सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको चुनाव २६ र ३० गते हुने
काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सभामुख फागुन २६ गते र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष ३० गते चयन हुने भएको छ ।
सरकार र फोरमको वार्ता आज पुनः बस्ने
काठमाडौं । सत्तारुढ दल एमाले–माओवादी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबीच संविधान संशोधन र सरकारमा सहभागिताका विषयमा दिउँसो भएको छलफल मा पुन साँझ बस्ने गरी सकिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट जेष्ठ सांसद ठाकुर र भट्टले लिए शपथ
काठमाडौ । राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक तथा सांसद महन्थ ठाकुर र नेपाली कांग्रेसकी सांसद तारादेवी भट्टले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ज्येष्ठ सदस्यको शपथ लिएका हुन् ।
३१ मन्त्रालयलाई गाभेर १८ मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सरकारले विद्यमान ३१ मन्त्रालयलाई गाभेर १८ वटा कायम गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै मन्त्रालय गाभ्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलमा शेरबहादुर र प्रकाशमानले उम्मेदवारी दिने
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।
एमाले–माओवादी एकताः विधान मस्यौदा कार्यसमितिको बैठक सकियो
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको विधान मस्यौदा कार्यदलको बैठक दुर्इ वटा समिति गठन गरेको छ ।
नकुहिने प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाइने : मन्त्री पण्डित
भक्तपुर । जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले नकुहिने प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाइने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदमा चार सदस्य थपिएका छन् । एमालेका २ र माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले सपथ लिएका हुन् ।
डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुने
काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट सोमबार दुई मन्त्रीले मात्र सपथग्रहण गर्ने भएका छन् ।
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा जान सहमत भएका छन्। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग सोमबार बिहान भएको वार्तापछि यादव सरकारमा आउन सहमत भएका हुन्।
माधव नेपाल नेतृत्वको कार्यदल बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रतिवेदन मस्यौदा कार्यदलको बैठक सकिएको छ। माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आजदेखि प्रतिवेदन लेखनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसमामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद भागवण्डा मिलेको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले मन्त्री छान्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ । स्थायी कमिटीको शुक्रवार बालुवाटारमा बसेको बैठकले माओवादी तथा मधेशवादी दलहरुसँग समेत छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने जिम्मा ओलीलाई दिएको हो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत पहिलो साता भित्र पार्टी एकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित काम थाल्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौं । एमाले र माओवादीको पार्टी एकता दस्तावेज तयार पार्न गठित दुई कार्यदलको संयुक्त बैठक बालुटारमा जारी छ ।
ओली र प्रचण्डबीच छलफल सकियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा धानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको हो । प्रधान मन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार दुई नेताबीचको भेटवार्ता सकिएको छ।
ओली र प्रचण्डबीच पार्टी एकतामा सहमति, ७ बजे संयोजन समितिले टुङ्गो लगाउने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ ।
संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन फागुन २१ गते आह्वान
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब तीन महिनापछि फागुन २१ गते संघीय संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ ।
ओली र प्रचण्डको छलफल निष्कर्ष विहीन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको वार्ता सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच निर्णायक छलफल गर्दै
काठमाडौं । पार्टी एकता र मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आज निर्णायक छलफलमा जुटेका छन् ।
मन्त्रालयको नीति अध्ययन गरी अघि बढ्छु : मन्त्री पण्डित
काठमाडौं । नवनियुक्त जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले आफु मन्त्रालयको नीति र विज्ञहरुसँँग छलफल गरी अघि बढ्ने बताएका छन् ।
देउवाले छाडे बालुवाटारको सरकारी निवास
काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी निवास बालुवाटार छाडेका छन्। ज्योतिषको सल्लाहअनुसार बालुवाटार प्रवेश गरेका देउवा ज्योतिषकै परामर्श अनुसार आज मध्यान्न बालुवाटार छाडेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिए सपथ, लालबाबु र थममायाले पनि लिए मन्त्रीको सपथ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा शपथ गराएका छन् । उहाँ देशको दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
ओली प्रधानमन्त्री दाबीको पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पेस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दाबी पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेका छन् । ओलीसँग माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सँगै शितलनिवास पुगेका थिए ।
ओलीले बोलाए एमालेको आकस्मिक बैठक
काठमाडौं । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको निर्णय गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेश ४ को संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध चयन
पोखरा । एमाले केन्द्रीय सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेश नम्बर ४ को संसदीय दलको नेतामा निर्विरोध चयन भएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।
प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा शेरधन राई निर्वाचित
विराटनगर । प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा एमालेका शेरधन राई निर्वाचित भएका छन् । संस्थापन पक्षबाट राई र माधवकुमार नेपाल समूहबाट भीम आचार्य चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । राईले २६ मत पाए भने आचार्यले २४ मत ल्याएर उपविजेता बनेका थिए ।
डोरमणी पौडेल ३ नम्बर प्रदेश संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित
काठमाडौं । नेकपा एमाले प्रदेश ३ को संसदीय दलको नेता डोरमणि पौडेल निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हराउँदै पौडेल शुक्रबार दलको नेता चयन भएका हुन् ।
६ वटा प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको ६ वटा प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रदेश २ मा भने यसअघि नै सबै सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्।
प्रदेश २ का निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रियसभा सांसद्ले आज प्रमाणपत्र पाउने
काठमाडौं । प्रदेश २ बाट राष्ट्रियसभामा निर्विरोध निर्वाचित सांसद्लाई आज निर्वाचन आयोगले विजयी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतदान हुँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको मतदान देशैभरि भईरहेको छ । आज छ वटा प्रदेशमा मतदान सुरू भएको छ भने प्रदेश २ को निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यापारी अजयराज सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकम नरोकी उनलाई भुक्तानी दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत आजदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवारले आइतबारसम्म निर्वाचनको अन्तिम प्रचारप्रसार गरेका छन्। आजदेखि कुनै पनि प्रचारात्मक गतिविधि गर्न पाइने छैन।
प्रदेश १ र ४ मा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । प्रदेश सभा अधिवेशन अन्तर्गत आज प्रदेश नम्बर १ र ४ को पहिलो अधिवेशन सुरु हुँदैछ। प्रदेश नम्बर १ को बिराटनगर र प्रदेश नम्बर ४ को पोखरामा प्रदेशसभा बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ ।
चार वटा प्रदेशको पहिलो अधिवेशन आज
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ को प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक आज हुँदैछ । संघीय संरचनामा पहिलो पटक प्रदेश सभाका अधिवेशनहरु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री र भारतीय विदेशमन्त्रीबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपाल भ्रमणको क्रममा रहेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता भइको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज राजनीतिक भेटवार्तामा व्यस्त
काठमाडौं । दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रहेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आज औपचारिक राजनीतिक भेटघाट गर्दैछिन् । स्वराजले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेकी छन् ।
भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज आज नेपाल आउँदै
काठमाडौं । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज दुई दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदैछिन् । उनी अपराह्न तीन बजे नेपाल आउने भएकी हुन् ।
काठमाडौं । प्रदेश ३ को प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन आज औपचारिक रुपमा सुरु हुने भएको छ । अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। प्रदेश सभाका सबै सांसद् हेटौँडा पुगिसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री र सभामुख प्रदेश इन्चार्जको समन्वयमा चयन गर्ने
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश इन्चार्जको समन्वयमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभामुख चयन गर्ने भएको छ ।
नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फागुन अन्तिम साता नेपाल आउने भएका छन् । नेपालसँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढाउने उदेश्यका साथ उनी नेपाल आउने तयारीमा जुटेका हुन् । मोदी भ्रमणको गृहकार्यका सिलसिलामा भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज भोली काठमाडौं आउँदै छिन् ।
एमाले स्थायी कमिटिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । पार्टी एकता, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा सभामुखहरुको विषयमा छलफल गर्न भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित स्थायी कमिटी बैठक पार्टी कार्यलयमा बस्दैछ ।
कांग्रेस नेताहरुले सडकमा बसेर जुत्ता पालिस गर्न थाले
काठमाडौं । शहीद दिवसको दिन मंगलबार विहानै बानेश्वरमा फरक दृश्य देखियो । उक्त दृश्य हेर्नका लागि सर्वसाधरणको भीड लागेको थियो।कांग्रेस नेताहरु सडक छेउमा लहरै बसेर जुत्ता पालिस गरिरहेका थिए ।
जनताका आगाडि गरेको प्रतिवद्धता वाम गठबन्धनले पुरा गर्छः प्रचण्ड
कठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय एकता र समृद्धिका लागि नयाँ संकल्प गर्न आह्वान गरेका छन् । देशलाई अराजकतातर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै उनले आफूहरुले त्यस्तो हुन नदिने पनि प्रचण्डले बताए ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि यही माघ २४ गते हुन गईरहेको निर्वाचनको लागि आज उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन हुने भएको छ ।
कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता अव जनमुखि बन्नुपर्छ :नेता धिताल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता विष्णु धितालले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरु अव जनतामुखि बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कार्यकर्ताको चाकडीबाज र नेताहरुको आफ्ना मात्रै राम्रा देख्ने परिस्थितीले गएको निर्वाचनमा पराजय भोग्नु परेको भन्दै उनले अव कांग्रेसका नेता देखि कार्यकर्ता सम्म सबै जनमुखि बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका हुन ।
उनले संगठन निर्माण र जनताको सेवाका लागि क्षमतावान युवाहरुलाई पार्टी र संगठनको जिम्मेवारी दिन पनि शिर्ष नेताहरुसँग आग्रह गरे । एजेन्डा विकास, सम्बृद्धि र भ्रष्टाचार निमुर्लन अव कांग्रेसको मुल एजेन्डा हुनुपर्ने पनि नेता धितालको तर्क थियो । त्यस्तै उनले सबैले पद मात्रै खोज्ने भन्दा पनि बाहिर बसेर संगठन निर्माणमा योग्दान गर्न पनि आग्रह गरे ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ। माघ २४ गतेका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार टुंग्याउने अन्तिम तयारीमा दलहरु
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले भोली माघ १० गते बुधबारलाई उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको छ । उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार छनोट गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
दुई नम्बर प्रदेशमा चारवटा भाषाबाट शपथ लिए
जनकपुर । दुई नम्बर प्रदेशका एक सय ७ जना सांसदले फरक फरक भाषामा शपथ लिएका छन् । प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य लगनलाल चौधरीलाई नेपाली भाषामा शपग गराएका थिए ।
प्रदेश तीनका सांसदहरुले लिए सपथ ग्रहण
काठमाडौं । प्रदेश ३ का प्रदेश सांसदहरुको सपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न भएको छ ।
आज सातै प्रदेशका सांसदको शपथ ग्रहण हुने
काठमाडौं । प्रदेशको अस्थायी मुकाममा आज सातवटै प्रदेशसभाका ५५० सांसदहरुको शपथ ग्रहण हुँदैछ । संघीयताको कार्यान्वसँगै आजबाट प्रदेशहरुको गठन र कार्य औपचारिकरुपमा सुरु हुनेछ ।
ओली र दाहालबीच छलफल, छिट्टै पार्टी एकता टुंग्याउने
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच तीन घण्टा छलफल भएको छ । दिउँसो १ बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म बालकोटमा भएको बैठकमा कार्यदलको रिपोर्ट, प्रदेश सरकारको गठन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
सिके राउत नजरबन्दमा
धनुषा । स्वतन्त्र मधेश अभियान चलाइरहेका सीके राउतलाई प्रहरीले घरमै नजरबन्दमा राखेको छ। राउतलाई धनुषाको माछाबजारस्थित डेरामा नजरबन्दमा राखिएको हो ।
धनकुटा तनाब ग्रहस्त, अनिश्चितकालिन कर्फ्यू
काठमाडौं । सरकारले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई बनाएसँगै बिहीबार बिहानैदेखि धनकुटा तनावग्रस्त बनेको छ । उक्त क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालिन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोक्यो
काठमाडौं । सरकारले सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख तोकेको छ । बुधबार दिउँसो बसेको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त विषयको टुंगो लगायएको हो ।
प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे विवाद, अब मन्त्रिपरिषद बैठक ३ बजे बस्ने
काठमाडौं । प्रदेशहरुको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा विवाद हुँदा आज विहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित भएको छ । अस्थायी मुकाम तोक्न बुधबार विहान मन्त्रिपरिषद बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश अस्थायी मुकामसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नासाथ मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो अडान राखेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाड गर्न वाम कार्यदलको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज बस्ने वामपन्थी गठबन्धनको संयुक्त कार्यदल बैठकले राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँड टुंग्यायउने भएको छ । गठबन्धबिच राष्ट्रियसभाका ५६ सिटमा ७०÷३० प्रतिशतको अनुपातमा बाँडफाँड हुने भएको छ ।
काठमाडौं । हिजो स्थगित गरिएको मन्त्रिपरिषदको बैठक प्रधानमन्नी निवास बालुवाटारमा अहिले बसिरहेको छ। राजनीतिक दलबीचमा प्रदेश प्रमुख सिफारिसमा सहमति हुन नसकेपछि हिजो बैठक स्थगित भएको थियो ।
भोलीसम्मको लागि मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित
काठमाडौं । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने गरी मंगलबार बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार दिउँसो साढे ४ बजे बोलाएको बैठक बुधबार विहान बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका गरेका हुन् ।
चार बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौं । सरकारले आज सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने तयारी गरेको छ। सो विषयमा निर्णय गर्न दिउँसो साढे ४ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख तोक्नुका साथै प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने गरी अस्थायी केन्द्र तोक्न लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगले पाँच दलको बैठक बोलायो
काठमाडौं । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति तथा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन पद्दति लगायतका विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले पाँच दललाई छलफलमा बोलाएको छ। प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको कार्यतालिका नै प्रभावित हुने देखिएपछि आयोगले राजनीतिक परामर्श सुरु गरेको हो।
माओवादीका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा
काठमाडौ । माओवादीका बिना विभागीय मन्त्रीहरूले आज राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादीका मन्त्रीहरूलाई बिना विभागीय बनाए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सुनिश्चितताको लागि भन्दै बिना विभागीय भएपनि माओवादी मन्त्री सरकारमा बसिरहेका थिए।
वाम गठबन्धनको संयुक्त बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रदेश सरकार र राष्ट्रियसभा गठनमा गृहकार्य गर्न एमाले–माओवादी संयुक्त कार्यदलको बैठक आज सिंहदरवारमा बस्ने भएको छ । पार्टी एकता, राष्ट्रियसभा निर्वाचन तयारी, उम्मेदवार छनोटलगायत विषयमा छलफल पनि हुने भएको छ ।
आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी
काठमाडौं । आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको सिफारिस र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारी गरेको छ।
प्रचण्ड र नेकपा मसालका महामन्त्री सिंहबिच भेट
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहबीच वाम गठबन्धनको विस्तारका साथै राष्ट्रिय तथा आर्थिक एजेण्डामा समान धारणा बनाएर जाने विषयमा छलफल भएको छ ।
जनताले राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमान राख्ने जिम्मा वाम गठबन्धन दिए : ओली
काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाली जनताले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने जिम्मा वाम गठबन्धनलाई दिएकाले जनमतको कदर गर्दै आफूहरु अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक छिट्टै बस्छ : विश्वप्रकाश
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक छिट्टै बस्ने बताएका छन् । उनले उमेर हुनेले नभई एजेण्डा हुनेले पार्टीको नेतृत्व गर्ने बताए ।
सर्वोच्च इजालसबाटै डा. केसीले भनेः पराजुली भ्रष्ट र माफिया हुन्
काठमाडौं । डा गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतको कठघराबाटै प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली भ्रष्ट भएको बताएका छन्। उनले पराजुली भष्ट भएको र आफुले पुष्टि गर्न सक्ने बताएका हुन्।
काम सुरू गर्न कार्यदललाई ओली र प्रचण्डको निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन, प्रदेश सरकार र संसदको जिम्मेवारीबारे गृहकार्य गर्न गठन गरिएको कार्यदललाई अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।
आज एमाले–माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज पहिलोपटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्दै छ । बैठक दिउँसो तीन बजे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बस्ने छ ।
डा. केसीको मुद्दामा न्यायाधीश मिश्र र चालिसेले बयान लिने
काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको अपहेलना मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च प्रशासनले इजलास ताकेको छ। न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासमा केसीको बयान हुने भएको छ । बयान सकिएपछि सोही इजलासले केसीको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ।
एमाले स्थायी कमिटी बैठक ओली निवासमा सुरु
काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सुरु भएको छ। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता लगायतका विषयमा छलफल गर्न स्थायी कमिटिको बैठक बसेको हो।
एमालेले स्थायी समितिको बैठक बोलायो
काठमाडौं । एमालले पार्टी स्थायी समितिको बैठक सोमवार दिउँसो दुई बजे पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा बस्नेत भएको छ । बैठकमा माओवादीसँगको एकता, सरकार गठनमा भएका ढिलाई र पार्टी अध्यक्षको उपचार भ्रमणलगायतका विषयमा छलफल हुने हुने बताइएको छ ।
माघ २४ गते रााष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको आकस्मिक बैठकले माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा गठनका लागि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सकिएको छ। प्रदेश प्रमुख र अस्थायी सदमुकाम तोक्ने विषयमा अझै पनि अन्योलता नै रहेको देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रको बिस्तारित बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेकपा एमालेसँगको पार्टी एकता तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको बिस्तारित बैठक आज बस्दैछ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवास खुमलटारमा दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको छ।
एमाले र माओवादीका नेताहरु आज निर्वाचन आयोग जाने
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त रुपमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक नभएको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोग जाने भएका हुन् ।
प्रचण्ड र बाबुरामको भेटवार्ता
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईबीच आज भेटवार्ता भएको छ । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा भएको भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ ।
अध्यादेश बारे राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल जारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी के गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिले छलफल सुरु भएको छ ।
आज प्रदेशसभाका सांसदको सूची बुझाउने अन्तिम दिन
काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिकको सांसद टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमा आज अन्तिम दिन हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका लागि प्रचण्ड बिहीबार बिहान ९ बजे शितल निवास पुगेका छन् ।
ओली र प्रचण्डबीच भेटवार्ता, एक दुई दिनमै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ ।
पराजयको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वले लिनुपर्छ : केसी
नुवाकोट । नेपाली काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले सबै तहका निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजय नेतृत्वको कमजोरीका कारण भएको बताउँदै विगतका कमजोरीको समीक्षा गरेर पार्टीलाई नयाँ शिरावाट अगाडि वढाउनुपर्ने वताएका छन् । पार्टी पराजयको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने वताउँदै आफू आफ्नो तहवाट जिम्मेवारी लिन तयार रहेको समेत केसीको भनाई थियो ।
पार्टी एकतालाई अवरोध हुँदैन : प्रचण्ड
चितवन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकतालाई अवरोध पुग्ने गरी आफू जिल्लामा नबसेको बताएका छन्।
एमाले र माओवादीको आज संयुक्त बैठक बस्ने तयारी
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएपछि संयुक्त बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । साथै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु आज छलफलमा जुट्दैछन् ।
वैद्य माओवादीले कम्युनिस्ट समूहहरुको एकतामा जोड दिने
काठमाडौं । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले संगठन विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । उसले समाजवाद तथा साम्यवादमा जान चाहने कम्युनिस्ट समूहहरुको एकतामा जोड दिँदै वार्ता तथा संवाद अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न फोरम नेपालको सुझाव
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले राष्ट्रियसभा सम्वन्धी अध्यादेश तत्काल जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहित काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुटाउन आज बसेको प्रमुख ५ दलको बैठक विना निश्कर्ष सकिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री लगायत काङ्ग्रेसका शीर्ष नेतालाई छलफलका लागि शीतलनिवास बोलाएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाए ५ दलको बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय पार्टीहरुको संयुक्त बैठक आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस विभाजित बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक राष्ट्रिय दलहरुको संयुक्त बैठक बोलाएका हुन् ।
नयाँ सरकार गठनको लागि कुनै संवैधानिक जटिलता छैन : ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुनेवित्तिकै नयाँ सरकार गठनमा हुने बताएका छन् ।
प्रदेश सभाको समानुपातिक सिट आज बाँडफाँट
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनतर्फ समानुपातिकतको सिट बाँडफाँट आज गर्ने भएको छ। बिहीबार अबेरसम्म भए पनि सिट बाँडफाँट सक्ने आयोगको तयारी छ। बिहीबार समय अभावमा सिट बाँडफाँट नभएमा शुक्रबार बाँडफाँट हुनेछ।
विवेकशील साझाका उम्मेदवार रामहरि अधिकारीले दिए मतदातालाई धन्यवाद
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीको तर्फबाट काठमाडौं क्षेत्र नं ५ (क)को प्रदेशसभाको उम्मेदवार रामहरि अधिकारीले मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउने
काठमाडौं । नेपालमा वाम गठबन्धनको स्थीर सरकार बन्ने निश्चित भएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी गरेका छन् ।
सरकार निर्माण र पार्टी एकता सँगसँगै : माओवादी
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माण र पार्टी एकता सँगसँगै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेकोे छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्रै नयाँ सरकार : कानुन मन्त्री
काठमाडौं । कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गरेका हुन् । उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धि अध्यादेश संविधान सम्मत भएको दावी समेत गरे । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धि अध्यादेश जारी नगरेर मुलुकलाई चक्रव्यूहमा फसाउन नहुने तर्क पनि गरे ।
पार्टी एकता चाँडै हुन्छ : ओली
काठमाडौं । अन्नपूर्ण होटलमा आइतबार वाम गठबन्धनको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा अब पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिदैं ओलीले भने, ‘म एमालेको अध्यक्ष छँदै छु प्रचण्डजी माओवादीको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ’ ‘पार्टी एकता चाँडै हुन्छ ।
नयाँ सरकार गठनबारे केपी ओली र प्रचण्डबीच छलफल
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच निर्वाचनपछिको उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकार गठनबारे छलफल गर्न भेटवार्ता भएको छ ।
संगठन चुस्त र दुरुस्त बनाउन आवश्यक : कोइराला
चितवन । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेस पराजय हुनुमा सबै जिम्मेवार रहेको बताएको छन् ।
प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न
काठमाडौं । सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ को मतगणना सकिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तर्फको सबै क्षेत्रको मतगणनाको काम सम्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसका बिजयकुमार गच्छदारले झिनो मतान्तरबिच विजयी प्राप्त गरेको छन् ।
ओखलढुङगाका काँग्रेस नेता द्धयको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास
नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्यद्वय लीला बल्लब दाहाल (काका) र कुमार लुईटेलले नेपाली काँग्रेस ओखलढुंगाले जिल्लाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारका सन्दर्भमा सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण गराउदै कुनै भ्रममा नपर्न कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांगे्रस जिल्ला कार्यसमिति नुवाकोटले मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै पार्टी केन्द्रलाई ६ बुदे सुझाव पत्र पेस गरेको छ । पार्टी जिल्ला सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसीको अध्यक्षतामा बसेको आकास्मिक बैठकले सो सुझाव पेस गरेको हो ।
अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै मत ल्याउँदै केपी शर्मा ओली विजयी
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा क्षेत्र नंं ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा धेरै मत ल्याउँदै निर्वाचित भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलद्वारा पुनः मतदानको माग
तनहुँ । तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा क का नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले फर्जी मत भेटिएको भन्दै पुनः मतदानको माग गरेका छन् ।
समानुपातिक तर्फको मतगणनामा एमालेलाई कांग्रेसले पछ्याउँदै
काठमाडौं । प्रत्यक्ष तर्फको मतगणना सकिएको क्षेत्रहरुमा समानुपातिकतर्फको मतगणना भइरहेको छ ।
कांग्रेसको किल्ला मानिएको नुवाकोटमा वाम गठबन्धनको विजयी
काठमाडौं। कांग्रेसको किल्ला मानिएको नुवाकोटमा वाम गठबन्धनले सबैमा विजय हासिल गरेको छ । कांग्रेसका प्रभाशाली मानिएका नेता डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसीले आफ्नो किल्ला जोगाउन सकेनन्।
सिन्धुलीको दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धन विजयी
सिन्धुली । सिन्धुलीका दुवै क्षेत्रमा वाम गठबन्धन विजयी भएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ १ मा वाम गठबन्धन, नेकपा (एमाले)का गणेशकुमार पहाडी र २ मा (माओवादी केन्द्र)का गजुरेल विजयी हुनुभएको हो ।
खसेको भन्दा १२ मत बढी भेटिएपछि काठमाडौं ५ मा गणना स्थगित
काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नं. ५ को मतगणना स्थगित भएको छ । खसेको मतभन्दा १२ मत बढी भेटिएपछि मतगणना स्थगित भएको हो ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम अपडेट
ने.क.पा. एमाले ५७ २० ९६ ४४
ने.क.पा. माओवादी केन्द्र २३ १२ ४९ २०
नेपाली कांग्रेस १२ १० २६ १८
राजपा ३ ६ २ ८
समाजवादी फोरम ३ ७ ८ १०
३ - ३ ४
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को सुरुवातीमा प्रकाशमान र रविन्द्रको प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । धेरै चर्चामा रहेको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ को मतगणनाको सुरुवाती परिणाम आएको छ उक्त परिणाममा कांग्रेस नेता प्रकाशमानसिंहले अग्रता लिएका छन् भने विवेकशील साझाका रविन्द्र मिश्रले सिंहलाई पछ्याइरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम
गोर्खा २ मा बाबुराम र नारायणकाजीको तीब्र प्रतिस्पर्धा
गोरखा । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा भएको मतगणना अनुसार गोरखामा क्षेत्र नम्बर २ मा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजन एवम् उम्मेद्वार डाक्टर बाबुराम भट्टराई अग्रस्थानमा देखिएका छन्।
पहिलो चरणको मत गणनामा वाम गठबन्धन धेरै सिटको अग्रता, कांग्रेस पछिपछि
काठमाडौं । पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका ३२ जिल्लाका ३७ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र तीब्र गति मत गणना भईरहको छ ।
मतदाता परिचयपत्र नभएकाले पनि भोट हाल्न पाउने
काठमाडौं । मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्राप्त गरेका मतदाताले परिचयपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाच आयोगले आफ्ना सरकारी विभिन्न कागजात देखाएर मतदान गर्न पाउने व्यबस्था गरेको छ ।
सरकारले भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध गरेकोले ढुक्क भएर मतदान गर्न अनुरोध
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले २१गते ४५ वटा जिल्लामा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभानिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएका छन् ।
चुनावलगत्तै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने : मन्त्री
कैलाली । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चुनावलगत्तै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने बताएका छन्।
उपचारपछि थापाले भने थोरैमात्र गति रोकिएको भए जे पनि हुनसक्थ्यो
काठमाडौं । काठमाडौंको चपलीमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई लक्षित गरेर बम विस्फोट भएको छ । विस्फोटमा काठमाडौं ४ का उम्मेदवार थापासहित ११ जना घाइते भएका छन् । उनीहरु मध्ये चारको अवस्था गम्भीर छ ।
कांग्रेस नेता गगन थापामाथि बम प्रहार
काठमाडौं । चुनाव प्रचार प्रसारमा रहेका काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गगन थापालाई लक्षित गरी केही बेर अघि राजधानीको चपलीस्थित भंगालमा बम प्रहार भएको छ । उक्त बम प्रहारबाट थापासहित ६ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
कांग्रेस उमेद्वार लक्षित गरेर बम विस्फोट
नेपालगञ्ज । नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार मञ्जु खाँडमाथि लक्षित गरेर बम विस्फोट गराइएको छ ।
अब वाम एकतालाई कसैले रोकेर रोकिंदैनः प्रचण्ड
चितवन । ‘वाम गठबन्धन जिताऔं नागरिक अभियान’ चितवनले भरतपुर महानगरपालिका–६ गीतानगरमा आयोजित ‘प्रचण्डसँग नागरिक समाज’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि यति ठूलो तरंग राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नआएको बताए ।
अराजक तत्वलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने : प्रधानमन्त्री
धनगढी । नेपाल प्रेस युनियन कैलालीले आज बिहान धनगढी विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमत आउनेमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे।
५० वर्ष वाम गठबन्धनको सरकार : प्रचण्ड
चितवन । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब मुलुकमा वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार बन्ने दावी गरेका छन्।
दिउँसो एक बजेसम्म ३५ प्रतिशत मतदानः निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । पहिलो चरणको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत आइतबार ३२ जिल्लामा मतदान भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार दिउँसो एक बजेसम्म ३५ प्रतिशत भन्दा बढी मतदान भएको छ ।
मतदाताहरुको चुनावमा उत्साहपूर्वक सहभागिता
काठमाडौं । चुनावको पुर्वसन्ध्यामा भएको विभिन्न घटना क्रमले र चिसो मौसमले चुनावमा असर पर्ने त होइन भन्ने आम जनमासको आशंकालाई चिर्दै मतदाताहरु उत्साहपूर्वक चुनावमा जुटेका छन् ।
राजपा नेपालको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पहिलो चरण निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा आज मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुने
काठमाडौँ। पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने ३२ जिल्लामा बिहीबार मध्यरातदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। ३२ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारले आज अन्तिम चुनावी प्रचार–प्रसार गर्दैछन्।
अहिलेसम्म भ्रष्टाचार र कमिशन नखाएको ओलीको दाबी
बुटवल । बुटवलमा वाम गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिगो सरकार बनाउनका लागि वाम गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत दिन आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनपछि गठन हुने वामपन्थी सरकारले पाँच वर्षभित्र देशलाई तिब्र विकास बताए ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्वाचनविरोधी गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनताले चाहेको उम्मेदवारलाई निर्धक्कसँग मत हाल्ने र निर्वाचनविरोधी गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
चितवनको चुनावी सभामा प्रचण्ड सहभागी हुने
काठमाडौं । पुत्रशोकमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भोलि चितवनमा आयोजना गरिएको चुनावी सभामा सहभागी हुने भएका छन् ।
सिमरामा कांग्रेस उम्मेदवार चढेको गाडीमा प्रेसर कुकर बम बिस्फोट
सिमरा । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार चढ्ने गाडीमा बाराको सिमरामा प्रेसर कुकर बम बिष्फोट भएको छ । बारा क्षेत्र नम्बर ४ (क) का नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा उम्मेदवार ओमकृष्ण कार्की चढ्ने गाडीमा बिहान बम विस्फोट भएको हो ।
जगदिश्वरनरसिंह केसी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नुवाकोट क्षेत्र नं २ को क बाट प्रदेश सभा उम्मेदवार बनेका छन् । केसी नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति पनि हुन । विगत लामो समय देखि राजनीतिमा सक्रिय केसी सांसदको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेका छन्। यतिबेला चुनावलाई लक्षित गरि घरदैलो अभियानमा व्यस्त रहेका केसीसँग उनको उम्मेदवार र भावी योजनाका विषयमा गरिएको कुराकानी : चुनावी अभियान कस्तो चलिरहेको छ? चुनावी प्रचार अभियान निकै तीब्र रुपमा अघि बढिरहेको छ । विहान देखि बेलुकीसम्म नै हामी गाँउ–गाउँ, टोल–टोलमा पुगेर प्रचार–प्रसार गरिरहेका छौ । र, मतदाता पनि भोट हाल्ने दिनको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । तपाईलाई नुवाकोटका जनताले किन मतदान गर्ने ? म १६ वर्षको उमेर देखि नुवाकोटका जनताको घरदैलोमा पुगेर उनीहरुको हकहितमा काम गर्दै आएको छु । उनीहरुको साथीको रुपमा काम गरेको छु । मलाई यस क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाबारे राम्रोसँग थाहा छ । विकास निर्माणको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुन्छ भने म उम्मेदवार बनेको क्षेत्रमा मात्र होइन अन्यत्र पनि मैले सक्दो काम गरेको छु । फेरि पनि म जनताको सेवा र जिल्लाको विकासका लागि उम्मेदवार भएको हु । त्यसकारण मलाई यहाँका जनताले मतदान गर्छन भन्नेमा म ढुक्क छु । विकासका योजना चाही के–के छन् त ? म सँग धेरै योजनाहरु छन् । विशेषत यस क्षेत्रको प्रमुख समस्या भनेको सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी कै हो । यो समस्या समाधान गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व हो । त्यस्तै विगत लामो समय देखि रोकिएका विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने मेरो अर्को योजना रहेको छ भने तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी नुवाकोटलाई बनाउन पनि म लड्नु छु ।
एमालेद्वारा एक घण्टाका लागि चुनावी कार्यक्रम स्थगित
काठमाडौं । नेकपा एमालेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनबाट पार्टी स्तब्ध भएको भन्दै आइतबार एक घण्टा देशभरका चुनावी कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
डा. रामशरण महत चढेको गाडिमा बम प्रहार, ४ घाईते
विदुर । निर्वाचन प्रचारको लागि हिँडेको नेपाली काँग्रेस नुवाकोट क्षेत्र नं. १ को प्रचार टोली चढेको सवारी साधन माथि बम प्रहार भएको छ । शुक्रवार विहान करिव १० वजेको समयमा ककनी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ को सिकारीचौरमा वा.१६. च. ६६५ नम्वरको गाडिमा गराईएको विष्फोटमा परि विद्यार्थी नेता उपेन्द्र मिश्र र सविन लामा सहित ४ जना घाईते भएको काँग्रस नेता जानकारी दिए ।
नुवाकोट तारकेश्वरबाट ठूलो संख्यामा कांग्रेस प्रवेश
नुवाकोट । नुवाकोट जिल्ला तारकेश्वर गाउपालिका स्थित तारुका चन्दनीमा एमाले र माओवादीवाट २ सय जना भन्दा वढि नेता तथा कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
प्रचण्ड र देवी ज्ञवाली सँगसँगै चुनाव प्रचारमा
चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वाम गठबन्धनबाट चितवन ३ मा उम्मेदवार रहेका छन् । उनले घरदैलो अभियान सुरु गरेका छन् भने उक्त अभियानमा माओवादीले नै महानगरको मेयरमा पराजित गराएका एमालेका देवी ज्ञवाली चुनाव प्रचारमा सक्रिय भएर लागेका छन् ।
लडेर घाइते नारायणकाजी श्रेष्ठ घरदैलो गर्न नसक्ने
गोरखा । माओवादी केन्द्रका नेता तथा गोरखा–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ लडेर सामान्य घाइते भएका छन् ।
राप्रपाको राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काउनेसहितको चुनावी घोषणापत्र आज सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने संकल्पसहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । हिन्दु राज्य पुनस्र्थापना, राजासहितको प्रजातन्त्रलाई पनि घोषणापत्रमा सामेल गरिएको छ।
मधेशमा मधेशीलाई जिताउन महन्थ ठाकुरको आग्रह
गौशाला । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले ‘जन्मभूमिले बोलाएपछि’ यस पटक महोत्तरी जिल्लामा चुनाव लड्न आएको बताएका छन्। महोत्तरीको जलेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ठाकुरले मतदाताको विशेष आग्रहमा आफू महोत्तरीबाट चुनाव लड्न आएको बताए। उनले भने, ‘जन्मभूमिको आकर्षणले मलाई यसपालिको चुनावमा महोत्तरीबाट लड्न उत्प्रेरित गर्यो।’
कांग्रेसका नेताहरुलाई एक आपसमा मिल्न प्रचण्डको सुझाव
चितवन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुलाई आपसमा मिली वीपी कोइरालाको आदर्शलाई अंगाल्लेर पार्टीको नेतृत्व गरी पार्टीलाई अघि लैजान सुझाव दिएका छन् ।
कोमल वली उम्मेदवारी फिर्ता लिने कि चुनाव लड्ने दोधारमा
काठमाडौं । आज उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन भएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी कोमल वली विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको आसा र भरोसामा उम्मेदवारी फिर्ता लिने नलिने भन्नेमा दोधार भएकि छिन् । उनले दाङ क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिएकी हुन् ।
काठमाडौं । समाजसेवी रामहरि अधिकारीले साझा बिवेकशिल पार्टीबाट काठमाडौं क्षेत्र नं ५ प्रदेश १ (क) को प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता गारएसँगै गन्तव्य नेपालसँग कुरागर्दै उनले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्दै सम्बृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने योजना अनुरुप आफुले उम्मेदवारी दिएको प्रतिक्रिया दिए । विगत लामो समय देखि समाजसेवामा सक्रिय अधिकारीले बृद्ध आश्रम, असहाय, अपाङहरुलाई विशेष सहयोग गर्दै आएका छन् । यसका साथै २०७२ सालमा गएको महाभूकम्प पछि राहत र उद्धारमा समेत उल्लेखनिय सहयोग गरेका थिए । हाल गौरा–पार्वती समुदायिक आस्पतालको प्रमुख सल्लाहकार , रसुवा नुवाकोट पर्यटन समाजको सल्लाहकार, पशुपतिनाथ (बागमती गंगा आरति सेवा)समितिको सहयोगी सदस्य, विश्व हिन्दु महासंघ नेपाल राष्ट्रिय समितिका आजीवन सदस्य र रारा समाज, धुम्बाराहीका अध्यक्षको रुपमा समेत कार्यरत छन् । स्पष्टवक्ता एवं शालिन स्वभावका अधिकारी सबैका प्रिय बन्न सफल भएका छन् ।
२०४८ सालदेखि निर्वाचित हुँदै आएका नारायणमान विजुक्छे उम्मेदवारी दिएनन्
काठमाडौं । २०४८ सालदेखि भक्तपुरबाट निर्वाचित हुँदै आएका नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले यस पटक प्रतिनिधिसभामा मनोनयन दर्ता गराएनन्।
वाम गठबन्धनमा टिकटको भागबन्डा मिल्यो
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले टिकट बाँडफाँटको विवाद मिलाएका छन्। दुवै दलले केही निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यमा उम्मेदवारको पनि टुंगो लगाएका छन्।
प्रदेश २ मा फोरमलाई १७ र राजपालाई १५ सिट बाँडफाँट
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रदेश २ का प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँट गरेको छ ।
विनोध चौधरी कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सूचीमा
काठमाडौं । विश्वकै धनीहरुको सूचीमा परेका व्यापारी विनोद चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक सूचीमा राखेको छ ।